Ukuqwalaselwa kuKwakha iVs yokuthenga iMarTech | Martech Zone
Ulwakhiwo xa kuthelekiswa nengxaki yokuthenga i-7: Uqwalaselo oluyi-XNUMX lokuthatha isigqibo ngeyona nto ilungileyo kwiShishini lakho
NgoLwesithathu, Aprili 7, 2021 NgoLwesithathu, Aprili 7, 2021 Unnathi Rayaprolu
Umbuzo wokuba uza kwakha okanye uthenge isoftware yingxoxo ende eqhubekayo phakathi kweengcali ezinezimvo ezahlukeneyo kwi-intanethi. Ukhetho lokwenza eyakho isoftware engaphakathi endlwini okanye ukuthenga isisombululo esilungele ukuthengiswa kwintengiso kugcina uninzi lwezigqibo zididekile. Ngeemarike ze-SaaS ezihambela phambili kuzuko lwazo olupheleleyo apho ubukhulu bemakethi bucingelwa ukuba bufike kwi-USD 307.3 yezigidigidi ngo-2026, yenza ukuba kube lula ukuba iimveliso zibhalise kwiinkonzo ngaphandle kwesidingo sokugcina izixhobo zekhompyutha okanye ezinye izixhobo.
Ngaphambi kokuba singene ngqo kwingxoxo-mpikiswano malunga nokwakha ngokuthenga, makhe sihlolisise indlela yokuziphatha kwabaxumi kunye neendlela zokuthenga eziye zadlula kwinguqu.
Uguquko lwedijithali lunabathengi abaxhobileyo abanee-smartphones, iitafile kunye nabasebenzisi namhlanje abafuna inkonzo kunye nolindelo, ngokwenza njalo babumba imveliso abayidlayo. Zihambile iintsuku zeempawu ezinyanzelisa kwaye zichaphazela ulindelo lwabathengi. Ngelixa ukhetho-ukudinwa kunye nengcinezelo yokhetho ichaphazele inkqubo yokwenza izigqibo, iinjini zokuthelekisa amaxabiso, ezidityaniswe namazwi eeNkokeli eziPhambili zeMbono (ii-KOLs) kunye nabashukumisayo, banceda abasebenzisi ukuba bathenge izinto ezinolwazi.
Indlela yokuThenga yanamhlanje
Ukutshintshwa kwamandla okutshintsha kwamandla phakathi kwabathengi kunye neempawu kuye kwalungisa indlela yokuthenga ngokwesiko. Indlela yokuthenga yale mihla, eqhutywa yinkqubela phambili yezobuchwephesha kunye nemithombo yolwazi emininzi, ikhuphe iimveliso ezishelfini zevenkile yazibeka ngaphakathi kwenkqubo yedijithali, egqitha kwizithintelo zejografi ukwenza ukuthengiselana kungabinamthungo kwaye kubenomdla.
umthombo: Isikhokelo somThengi seMoEngage kuThengiso lwabaThengi
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa indlela umjikelo wohambo lomthengi ohambe ngayo kutshintsho olukhulu lweparadigm, olutshintshe ubudlelwane bekhonkco lomthengi ukusuka kunikezelo oluqhutywa kukuqhutywa yimfuno.
Ukujonga la manqaku angasentla malunga nokuba iimveliso zijolise ekubeni ziphi ngakumbi kubathengi kwimisebenzi yabo, kubaluleke ngakumbi ukujongana nokwakha kunye nokuthenga ingxaki. Kodwa ayisiyiyo ngqo. Ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba kungcono ukwakha iqonga ukusuka ekuqaleni okanye ufumane itekhnoloji esele ikho, Nazi izinto ezimbalwa ekufuneka uzithathele ingqalelo:
Iindleko ezichaphazelekayo ekwakheni okanye ekuthengeni: Ukwakha into kwasekuqaleni kuya kuba nkulu ngokuxhomekeke kubungakanani beqela / lenkampani kwaye kuya kufuneka uphendule ngeyure yeeyure zomntu, iziseko zophuhliso, kunye nolondolozo, zonke ekunzima ukuziqikelela ngokuchanekileyo. Ngeli xesha uthenga isisombululo sokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kwiqela, umntu unokufuna ukuba aqwalasele imirhumo yelayisensi eyahluka ngokusekwe kubalo lomsebenzisi olusebenzayo kunye neenkonzo ezisetyenzisiweyo.
Ukuhamba nomngcipheko ngelixa uthenga okanye usakhaUmngcipheko ophambili ochaphazelekayo ekuthengeni ulawulo olulinganiselweyo kunye nokufikelela kwisoftware, ikhowudi yemithombo yolwazi, kunye ne-bug, ngeli xesha ngokwakha isisombululo umngcipheko omkhulu uxhomekeke kubuchule bokuhambisa liqela lophuhliso elinokubangela ukwanda kweendleko.
Ingxaki isonjululwe ngesisombululo: Akubobulumko ukuya engxakini yokwakha into ekhethekileyo ukusuka ekuqaleni ukuba ayongezi ngqo kumgca wakho osezantsi. Kuhlala kucetyiswa ukuba uthenge izinto zonke iinkampani ezifunekayo kwaye wakhe ezahlukileyo.
Ukulandelela irekhodi leqela lophuhliso: Linganisa izakhono zeqela lakho lophuhliso kunye nokukhula ngokubhekisele kubuchule, ubuchule, kunye nokukwazi ukuhambisa. Ukuba balinganisa inqanaba elilungileyo, emva koko ukwakha isoftware ngaphakathi endlini kunengqondo ngakumbi xa kuthelekiswa nokuthenga isisombululo esilungele ukuthengisa.
Izibonelelo ezikhoyo onazo: Uhlahlo-lwabiwo mali yinto enkulu yokuthatha isigqibo xa kuziwa kuthenga vs ukwakha ingxoxo. Ngaphezulu komda wokuchitha osetyenziswe ziimpawu, kunika ukwakha isoftware ngakumbi. Kwiinkampani ezinoluhlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo, ukuthenga isisombululo yindlela elula yokujongana noku.
Ixesha lokuya kwintengiso: Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe kukuthenga isisombululo sesona sicwangciso sokuya kwintengiso ngokukhawuleza njengoko sinokuthi sihanjiswe kwisithuba seeveki ezisibhozo ukuya kwishumi elinesithandathu (kuxhomekeke kubunzima bamatyala okusetyenziswa) xa kuthelekiswa neenyanga okanye iminyaka Thatha ukwakha iqonga ngaphakathi endlwini.
Izinto eziphambili ngokubaluleka kwishishini lakho: Ukuba uzakhela esakho isisombululo ngaphakathi, ngaba iya kuba yinto ephambili kwishishini lakho? Ngokunokwenzeka akunjalo, oko kunokukhokelela ekubeni ibe sisithintelo kwinkqubela phambili ukuba inkampani yakho ayinakuqhubeka nokutyala imali kuyo. Itekhnoloji ihlala ijikeleza utshintsho, ayisiyonjongo yenziweyo. Inkampani ephuhlisa isisombululo onokuyithenga ixhomekeke kwisisombululo esivelayo kwaye siqhubeka nokubonelela ngexabiso kubathengi baso.
Umntu kufuneka aphephe ukuchitha ixesha ekwakheni nasekuyileni into esele yakhiwe kakuhle kwimarike. Injongo yokugqibela yeemveliso kukubonelela umthengi ngamava aphambili eklasini kwaye ukuba oko kuhanjiswe yitekhnoloji esele ikho, ngaba umntu kufuneka achithe ixesha elininzi kunye namandla ekwakheni isisombululo?
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwiinkampani kukuba kukucinezela amava abantu abawabonelelayo kwindawo nganye yokuthintela abasebenzisi kunye nokuphucula inkxaso kunye neenkonzo zabo zabathengi. Umsantsa osoloko usanda phakathi kokulindelweyo ngabathengi kunye nokukwazi ukuwuphumeza ngomnye wemicimbi emikhulu abaphathi belixesha abazimisele ukuyisombulula. Ukuze uqonde ukuba izinto ezilindelwe ngabathengi zitshintshe njani, kubalulekile ukuba uqaphele utshintsho olwenziweyo kubasebenzisi nakwindlela yokuziphatha nendlela abachaphazela ngayo izigqibo zokuthenga.
tags: ubudlelwane brandukwakha xa kuthelekiswa nokuthengaYakha vs uthengeuhambo lwabathengiumjikelo wobomi bomthengiPhuhlisoubuchwepheshe obuvelayoNgendluItekhnoloji yentengisomartechItekhnoloji yakudalaItekhnoloji ephelelwe lixeshaindlela yokuthengaTechnology
U-Unnathi ungumthengisi kwaye enomdla wokufunda nantoni na entsha kunye nokuzonwabisa kwiinkcubeko ezahlukeneyo ngelixa ehamba. Ukonwabela ukufunda kakuhle kunye nekomityi yekofu nangaliphi na ixesha losuku.
Ukumaketha: Ukulungelelanisa i-B2B yokuThengisa kunye namaQela okuThengisa